परनिर्भरता र कोरोनाको कुप्रभाव – Chitwan Post
परनिर्भरता र कोरोनाको कुप्रभाव
भौतिक दुनियाँमा चुर्लुम्मै डुबेका विश्वमानवमध्ये कोही गरिब छन् त कोही धनी । प्रकृतिले जन्माएका मानवबस्तीमा यस्तोचाहिँ किन हुन्छ कुन्नि थाहा छैन, तर संसारमा धनीहरुको संख्या कम र गरिबहरुको संख्या बाक्लै हुन्छ । यस्तो पनि होला कि प्रयोगात्मक हिसाबले हेर्दा पनि कसैको क्षमता ज्यादा र कसैको कम हुने भएकैले बराबर धन बाँडिदिने हो भने पनि कसैले धेरै धन जम्मा गर्छन् त कसैले कम ।
पाँचवटा कुखुराको भालेलाई दुई–दुईवटा भागमा पर्ने हिसाबले मकैका गेडा छरिदिने हो भने कुनै भालेले चारवटासम्म टपाटप टिप्छ त कसैले एउटा टिप्छ भने कुनैले दुईवटा टिप्छ त कसैको भागमा एउटा पनि गेडो पर्दैन, अर्थात् कुनै भालेले एउटा गेडो पनि टिप्न सक्दैन ।
कुनै भाले फूर्तिलो हुन्छ त कुनै लोसे । कुनै ठिकै खालको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुई–दुईवटा भागमा पर्ने हिसाबले मकैको गेडा भालेहरुको माझमा छर्दा पनि बराबर टिप्न सक्दैनन् । यसैलाई प्रकृतिको नियम भनिएको हुनुपर्छ । फेरि प्रकृतिको नियम, न्याय वा विशेषतालाई गहिरिएर बुझ्ने प्रयास गर्ने हो भने अचम्म लाग्छ । एउटा अर्को उदाहरण गहुँखेतीलाई लिन सकिन्छ । एकैदिन एक बिगाहा जग्गामा गहुँ छरिएको छ । मल पनि बराबरै पुग्ने हिसाबले छरिएको छ । पानी पनि उपलब्ध गराइएको छ, तर अचम्म कहाँनेर हुन्छ भने कुनै गहुँको बिरूवा एकबित्ता अग्लो हुँदा अर्को बिरूवा दुई इन्चमात्रै अग्लो हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? हो, कसैले बीउको क्षमतामा प्रश्न खडा गर्न सक्छन्, तर प्रकृतिको रहस्य यही नै हो भन्न सक्ने खाँटी कुरा भने पत्ता लगाउन कठिनै हुन्छ ।
अब मान्छेको कुरा पनि त्यही हो । तीन जना मान्छेलाई पाँच–पाँच हजार रूपैया मन लागेको कुुरामा खर्च गर्नु भन्ने आदेशका साथ बजार पठाउने हो भने कसैले पाँचै हजार खर्च गरेर सिध्याउँछ त कसैले आधा रकम खर्च गर्छ र कसैले उस्तै परे खरिद गर्ने चीजै देखिनँ भन्दै पूरै पैसा जस्ताको त्यस्तै फिर्ता ल्याउँछ । यसरी कसैले ज्यादा खर्च गर्ने, कसैले कम त कसैले खर्चै नगर्ने हुँदा पनि कसैसँग धन रहने र कसैसँग पूरै सकिने हुन जान्छ । अर्कोतिर नाफा रकमलाई ठीक ढंगले बचत गर्ने र ठीक ठाउँमा ठीक तरिकाले लगानी गर्नेहरुसँग धन जम्मा हुन जान्छ र त्यो व्यक्ति धनी कहलिन्छ । अब फेरि जसले उत्पादनलाई ज्यादा मह¤व दिन्छ कालान्तरमा उही धनीमा गनिन्छ । यो नियम व्यक्तिमा मात्रै होइन, देशको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । उत्पादन गरेर सामान बिक्री गर्नेहरुले निश्चितरुपमा उत्पादनमा नाफा जोडेर नै बिक्री गर्छन् । त्यो नाफाको मात्रा थुप्रिँदै जाँदा उत्पादन गरेर बेच्नेहरु धनी हुन्छन् ।
अब देशको कुरा गर्दा नेपालको उत्पादन र बिक्री के हो हिसाब गर्दा यो जानकारी मिल्छ कि नेपाल धनी हो वा गरिब ! नेपालले आफ्नो देशमा उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने सामानका रुपमा अलैँची, यार्सागुम्बा, अदुवा वनस्पति घिउलगायतका वस्तुमात्रै रहेको छ भने नेपालले आफूलाई चाहिने सबै वस्तु विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । आयात–निर्यातको हिसाब हेर्दा आयात ९७ प्रतिशत र निर्यात ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । संसारका सबै मान्छेलाई थाहा छ, यति उच्च व्यापारघाटाले देश चल्न सक्दैन । कुनै पनि हालतमा चल्न सक्दैन र पनि नेपाल चलिरहेको छ, किन ? देश चल्ने कारणको रुपमा रेमिट्यान्स रहेको सत्य हो ।
नेपालले उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गरेर वा कृषिलाई पहिलो आम्दानीको स्रोत मानेर उत्पादन बढाउनतर्फ कहिल्यै लागेन । देशका होनहार युवायुवतीलाई विदेशमा कामदारको रुपमा पठायो । भारतलाई छाडेर संसारका अन्य मुलुकमा झन्डै ४२ लाख नेपाली युवायुवती विदेशिए । तिनै विदेशिएका नेपालीले रगत–पसिना बगाएर नेपाल पठाएका रकमबाट देशको बजेट बनाउने काम भयो । रेमिट्यान्स पहिलो आधार, दोस्रोमा पर्यटन व्यवसाय र तेस्रोमा आन्तरिक आयबाट धानिएको नेपालको अर्थतन्त्र कुनै बेला यी तीन आधार भत्किएको खण्डमा के हुन सक्छ भन्ने कहिल्यै नसोच्दा आज देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न लागेको संकेत देखिएको छ । देशका युवायुवतीलाई देशभित्रै काममा लगाउनुपथ्र्यो वा विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न लगाएर आफ्ना नागरिकलाई विदेशीले लगानी गर्ने उद्योग कलकारखानामा रोजगारी दिनुपथ्र्यो । तर, अर्काले रोजगारी दिए खाना र दाम पाइने नभए भोकै बस्नुपर्ने खालको परनिर्भरतालाई स्वीकारियो । कुनै बेला आज रोजगारी दिइरहेका देशहरु कुनै खालको संकटमा पर्न सक्लान्, नेपाली युवायुवतीलाई रोजगारी दिन नसक्लान् त्यस्तो अवस्थामा नेपालको हालत के हुन्छ भन्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिइएन । परिणाम आज देखिएको छ कि कोरोना भाइरसका कारण आज विश्वका धनी र सक्षम कहलिएका देशहरु जसले नेपालीहरुलाई रोजगारी दिइरहेका थिए उनीहरु कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने धुनमा छन् ।
विश्वबाट नेपाली रोजगारी करिब करिब समाप्त हुन लागेको छ । अब रेमिट्यान्स आकाशको फल हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विदेशीहरु नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न आएर तिनले बुझाउने पैसालाई हामीले पर्यटन व्यवसाय भनेका हौँ । यतिबेला शायद केही राजदूतलाई छाडेर संसारका सबै विदेशी नागरिकहरु आआफ्ना देश फर्किसकेका छन् । अब फेरि पर्यटन व्यवसाय सुरूमात्रै हुन पनि संसारबाट कोरोना भाइरस पूरै नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसका लागि टालटुले ओखतीले काम गर्नेवाला छैन । कोरोना नियन्त्रणका लागि खोप पत्ता लगाउन जरूरी बताइएको छ र खोप पत्ता लगाउन कम्तीमा एक वर्ष समय लाग्ने बताइएको छ । अब एक वर्षको अवधि नेपालजस्तो सबै कोणबाट कमजोर साबित देशले पर्खिन सक्दैन । नेपालको पर्यटन व्यवसाय ठीक तरिकाले तंग्रिन अहिले रोजगारी दिइरहेका देशहरु पहिले कोरोनामुक्त हुनुपर्छ । ती देशहरुमा आर्थिक अवस्था मजबुत हुनुपर्छ ।
अहिले अमेरिका र युरोपका कयौँ देशहरु आर्थिकरुपले धराशायी हुन लागेको खबर प्राप्त भएका छन् भने मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरु कुबेत, इराक, इरान, जोर्डन, टर्की, साउदी अरेबिया, मलेसिया, कतार, दुबईलगायतका देशहरु जसले लाखौँ नेपालीलाई रोजगारी दिएका छन् ती देशहरु चाँडो तंग्रिने सम्भावना अझै कम देखिन्छ । यसरी एकैपटक रेमिट्यान्स र पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भएपछि नेपाल धानिने आर्थिक आम्दानी नहुने निश्चित हुन्छ । अब देशभित्रको आन्तरिक कर र राजस्वबाट ठूलो रकम ढुकुटीमा जम्मा हुँदैन । फेरि कोरोना प्रभाव नेपाली जनताका लागि जीवन–मरणको सवाल बन्न पुगेको छ भने यसकै कारण देश ठप्प छ । झन्डै दुई महिना त सबै आर्थिक गतिविधि र आवतजावत पूरै बन्द भएका कारण कर र राजस्व उठ्ला भन्नु त कता हो कता उद्योगी व्यवसायी र निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक व्याज छूट र कर राजस्व छूट माग्न थालेका छन् । अब कोरोना प्रभाव घटेर देश पहिलाकै अवस्थामा फर्केको खण्डमा समेत कर र राजस्व उठ्न केही समय लाग्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसको उपस्थिति खासगरी भारत र नेपालमा कहिलेसम्म रहन्छ, त्यसको अनुमान कसैले गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यी सबै कारणहरुको एउटा पोकोले यही बताउँछ कि निकै लामो समयअघिदेखिको अरुले उत्पादन गर्ने र नेपालले उपभोग गर्ने अर्थात् पूरै परनिर्भरताका कारण आज देश लंगडो हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । देशलाई सम्भावित लंगडो हुनबाट बचाउन अरु कुनै उपाय देखिँदैन, देखिन्छ त केवल यही उपाय देखिन्छ । त्यो उपाय भनेको आजैदेखि कृषि उत्पादन बढाउनतिर लाग्ने, पेट्रोल र डिजेल खपत कम गर्न विदेशबाट गाडी आयात घटाउने, पेट्रोल र डिजेल प्रयोग हुने निजी सवारीसाधनमा तुरून्तै केही वर्षका लागि रोक लगाउने नै हो । एकातिर उत्पादनमार्फत आम्दानी बढाउने र अर्कोतर्फ फोकटको खर्च घटाउने हो । यदि यो उपाय यो देशले लागू गर्छ भने ढिलोचाँडो परनिर्भरताबाट मुक्त भएर फेरि तंग्रिएला, होइन भने कुन्नि के होला सजिलैसँग अनुमान गर्न कठिन छ ।
आफ्नो टोलमा अरुलाई प्रवेश नदिँऊ
अमेरिकामा बढ्दो कोरोना प्रकोप